Xisaabinta size ee jaranjarada la marxaladaha Rotary
Xisaabinta jaranjarada leh tallaabooyinka pivoting of 90°
Miisaanka sawir 1: 12345678910
width ee jaranjarada Z
Tirada tallaabooyinka guud ee C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
Number of marxaladaha Rotary C2 234567891011121314151617181920
Tirada heerarka hoose C1 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
oo dhumucdiisuna waxay of tallaabooyinka W
oo dhumucdiisuna waxay of wejigooda ku T
barqiyey show H
habka xisaabinta ee jaranjarada alwaax
Z - width ee jaranjarada
W - oo dhumucdiisuna waxay of tallaabooyinka
C - tirada tallaabooyinkaygu
C1 - tirada tallaabooyinkaygu inta ay hoos u March
C2 - Number of marxaladaha Rotary
Xisaabinta jaranjarada leh tallaabooyinka pivoting of 90°.
jaranjarada Wooden la marxaladaha Rotary weyn runtii badbaadin karo meel bannaan oo guriga oo aan laga badiyay ku habboonaan iyo ka shaqeynayaan.
Marka la xisaabinayo ay tirada isitcmaalo marxaladaha Rotary dareenka mushaharka. In aan waayo-aragnimo u fiicnayn 3-yada la jaranjarada width 80 cm. More - tallaabooyinka ay noqon doontaa mid aad u dhuuban oo si raaxo.
Haddii farqiga ay tahay oo keliya in ka badan dhigeen jaranjarada dusheeda, waa quruxsan muhiim ah in meel ka mid ah rogista cajaladda in daboolaa, si looga fogaado dhaawac madaxa. Waa in uu ahaadaa ugu yaraan 2 mitir.
Iyada oo qaab-dhismeedka this, width sallaan kaalin muhiim ah. Sida saamayn toos ah ku istareexsan ee jeestay tallaabooyinka. The jaranjarada ballaaran - ugu weyn tirada tallaabooyinkaygu inta lagu saleyn karaa iyadii oo aan khasaaro of sahlanaato.
Sababtoo ah kala duwanaanta mashaariicda iyo dhismayaasha, cuskado for jaranjarada barnaamijka laga yaabaa in aan la xisaabiyo iyo soo bandhigay.
muhiim ah! Waa inaad taxadar in dhinacyada oo ka mid ah tallaabooyinka soo jeestay. Si aad u hesho size ee stage - ha ilaawin inaad kudar size ee lacagta protrusion ah.
Xisaabinta jaranjarada dhagaxa jiro kala duwan ee xisaabinta oo qoryo ama biraha jaranjarada. Waxa ugu weyn ee - si ay u xisaabiso size ee wareega. Waxa ay height waxaa looga baahan yahay in ay isku mid u ah qaybaha oo dhan u noqon.
Xisaabinta jaranjarada dhaw raaxadeeda waxa loo xisaabiyaa by formula ku salaysan dhererka tallaabada.
dhererka garoonka Human u dhaxeysa 60 ilaa 66 cm, celcelis ahaan - 63 cm.
sallaan raaxo u dhiganta formula ah: 2 tallaabo height + qoto-yada = 63±3 cm.
The rabitaan ugu haboon ee sallaan - laga bilaabo 30° ilaa 40°.
tallaabooyinka jaranjarada waa in ay buuxiyaan Qoto size 45 kabaha - oo aan ka yarayn 28-30 cm.
La'aanta qoto dheer magdhow kartaa talaabo qiyaas ah.
height yada waa in ay ahaataa 20-25 cm.
Barnaamijku wuxuu soo jiidi doonaa jaranjaradii waxayaala la marxaladaha Rotary la xaglo ugu weyn oo dhinacyada.
In sawiro muujiso dhinacyada guud ee jaranjarada, sixitaanka sare ee talaabooyinka on xarig ah, labada geesood oo tallaabooyinka iyo cabbir asaasi ah oo isu tallaabooyinka.
Waxaan rajaynayaa in barnaamijka uu gacan ka gaysan doono in aad qaabeyso aadna dhiso sallaan ku marag furo, ama guriga la gacmahoodu sameeyeen.